सन्दर्भ विश्व हाँसो दिवस : हाँसोबाट फाइदैफाइदा | Jwala Sandesh
सन्दर्भ विश्व हाँसो दिवस : हाँसोबाट फाइदैफाइदा
शंकरमान सिंह | प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख २१, २०७८ ::: 60 पटक पढिएको |
शंकरमान सिंह-महाकविले देवकोटाका अनुसार ‘गरिब भन्छौ सुखको मै छु धनी मिल्दैन कतै पनि’। मे महिनाको पहिलो आइतबार विश्व लाफ्टर डे हो, यो उत्सव जसले हाँस्नेका सबै फाइदाहरूको बारेमा जागरुकता जगाउँछ र हाँसोको माध्यमबाट विश्व शान्तिको प्रचार गर्दछ। हाँस्दा तुरुन्त तनाव कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र हामी अरू मानिससँग घनिष्ठ हुन्छौं, किनकि हामी उनीहरूसँग आफ्नो खुसी साटासाट गर्दछौं। जसले विश्व लाफ्टर डेमा भाग लिन्छन् त्यसले संसारलाई बदल्न मद्दत पुर्‍याउन सकरात्मकता र हँसिलोपन फैलाउन मद्दत गर्दछ।
हाँसोले तनावका हर्मोनहरू घटाउँछ र प्रतिरक्षा कोषहरू र संक्रमणसँग लड्ने एन्टिबडीहरू बढाउँछ।यसले गर्दा रोग प्रतिरोधको क्षमता बढाउँछ। हाँसोले एन्डोरफिनको रिलिज ट्रिगर गर्दछ, शरीरको प्राकृतिक अनुभव राम्रो रसायनिक समेत उत्पन्न गर्दछ। एन्डोरफिनहरूले समग्र कल्याणको भावनालाई बढावा दिन्छन् र अस्थायी रूपमा दुखाई कम गर्दछन्। यसैले
हाँसो उत्तम औषधि हो। राम्रो हँसाई साझेदारी गर्न रमाइलो छ तर के तपाईंलाई थाहा छ यो वास्तवमा तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्दछ। हाँस्य र हाँस्यका शक्तिशाली लाभहरू कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्।
हाँसो उत्तम औषधि हो। जीवन केवल एकपटक आउँछ, यसलाई लायक बनाउनका लागि तपाईंले दिनहुँ हाँस्नु आवश्यक छ। हाँसोले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत गर्दछ, मुड बढाउँछ, दुखाई कम गर्दछ। तनावको हानिकारक प्रभावहरूबाट तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ। हाँस्य र हाँस्यका लागि अधिक अवसरहरू खोजेर यद्यपि तपाईं आफ्नो भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्न, अझ बढी आनन्द पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईंको जीवनमा वर्षौं थप्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक वर्ष, मे महिनाको यो पहिलो आइतबारमा ‘विश्व लाफ्टर डे’ हुन्छ र यो वर्ष मे २ मा परेको छ।
हाँसो किन मन र शरीरका लागि सबैभन्दा मीठो औषधि हो? हाँसोले सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिन्छ। हाँसोले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ। हाँसोले एन्डोरफिनको रिलिज ट्रिगर गर्दछ। हाँसोले मुटुको रक्षा गर्छ। हाँसोले क्यालोरीहरू जलाउँछ। साथै हाँसोले रिसको भारी भार कम गर्दछ। हाँसोको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के हो? प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। तनाव हार्मोनहरू कम गर्दछ। दुखाई कम गर्दछ। तपाईंको मांसपेशीहरू आराम प्रदान गर्दछ।हृदय रोगबाट बचाउँछ। हाँसोको मानसिक स्वास्थ्य लाभ के हो?जीवनमा आनन्द र उत्साह थप्दछ। चिन्ता र तनाव कम गर्छ। तनाव कम गर्दछ। मुड सुधार गर्दछ र लचिलोपनलाई बलियो बनाउँछ।
हाँसो एउटा यस्तो कडी हो जसले धनीलाई गरिब अनि गरिबलाई पनि धनी बनाउँछ।हाँसो कडा औषधि होजसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीसमेत मजबुत बनाउँछ।
हाँसोको सामाजिक फाइदा पनि छ। यसले सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। हामीलाई अरू आकर्षित गर्दछ। सामूहिक कामलाई बढाउँछ। द्वन्द्व कम गर्न मद्दत गर्दछ। समूह सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ। हाँसो बिरामीका लागि छिटो पुनः रोग निको गर्न सहयोग पुर्‍याउन उपचार विधिका रूपमा प्रयोग भएको छ। हरेक दिन एक मिनेटको हाँसो, यसले ठुलो मुटु र रक्तवाहिकाहरूलाई मद्दत गर्दछ। अध्ययनहरूले देखाउँछ कि प्रिस्कूलरहरू दिनमा चार सयपटक हाँस्दछन्। दुर्भाग्यवश जब व्यक्ति वयस्कतामा पुग्छन्, हाँसोको आवृत्ति हरेक दिन औसतमा एक पटकसम्म अत्यन्तै कम हुन्छ।
विश्व हाँसो दिवसका सन्दर्भमा सुयोग ढकाल लेख्छन्, एउटा सानो फिरफिरे पाउँदा मात्र पनि एउटा बालक हाँस्दछ, मीठो मधुर अनि हजारौं रुपैयाँले पनि किन्न नसक्ने हाँसो। सन्तानसँग भेट्न पाउँदा एउटी आमा हाँस्छिन्, करोडौंले पनि खरिद गर्न नसक्ने अर्को हाँसो। अनि लाखौं, करोडौं बैंक ब्यालेन्स लिएर बसेको एउटा मान्छे महँगो गाडीमा सुकिलो कपडा लाएर पनि मिठो खानेकुराको भोगमा पनि एक पित्को हाँसो हाँस्न सकिरहेको हुँदैन। हाँसो एउटा यस्तो कडी हो जसले धनीलाई गरिब अनि गरिबलाई पनि धनी बनाउँछ।
हाँसो सत्य हो। हाँसो कडा औषधि हो। यसले मानिसहरूलाई शरीरमा स्वस्थ शारीरिक र भावनात्मक परिवर्तनहरू ट्रिगर गर्नका लागि एकसाथ तान्दछ। हाँसोले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत गर्दछ, मुड बढाउँछ, दुखाई कम गर्दछ। तनावको हानिकारक प्रभावहरूबाट तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ। केही छिटो वा अधिक निर्भरताले काम गर्दैन। तपाईंको दिमाग र शरीरलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि हाँसो पर्याप्त भूमिका खेलिरहेकै हुन्छ। हाँस्यले तपाईंको बोझलाई हल्का पार्छ, आशालाई प्रेरित गर्दछ। तपाईंलाई अरूसँग जोड्छ र तपाईंलाई ग्राउन्ड, फोकस र सतर्क राख्दछ। यसले तपाईंलाई रिस उठाउन र चाँडै माफ गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
दुःखेको मन निको पार्न र टुटेको सम्बन्ध नवीकरण गर्न हाँसो प्रयोगमा आउँछ। सजिलैसँग र बारम्बार हाँस्न सक्ने क्षमता बढाई समस्याहरूलाई पार गर्न हाँसो काम आउँछ। तपाईंको सम्बन्धहरू बढाउने र दुवै शारीरिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्ने जबरजस्त स्रोत हो यो। हाँसो सबैभन्दा राम्रो अमूल्य औषधि हो। जुन निःशुल्क प्रयोग गर्न सजिलो छ।बच्चाको रूपमा हामी दिनमा एकसयौं पटक हाँस्दछौं। वयस्कको रूपमा जीवन बढी गम्भीर र हाँसो अधिक विरलै हुन्छ। हाँस्य र हाँस्यका लागि अधिक अवसरहरू खोजेर तपाईं आफ्नो भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्न, अझ बढी आनन्द पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको जीवन वर्षौं थप्न सक्नुहुन्छ।
नर्वेमा गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि हाँसो फरक क्यान्सरसँग लड्नेहरूका लागि विशेष उल्लेखनीय हुन्छ।जब तपाई हाँस्न थाल्नुहुन्छ, यसले मानसिक रूपमा तपाईको
बोझलाई हल्का मात्र तुल्याउँदैन, यसले वास्तवमा तपाईको शरीरमा शारीरिक परिवर्तनकालागि प्रेरित पनि गर्दछ। हाँसोले धेरै अंगहरूलाई उत्तेजित गर्नुहोस्। हाँसोले तपाईंको अक्सिजनयुक्त हावाको सेवन बढाउँछ। तपाईंको मुटु, फोक्सो र मांसपेशीहरूलाई उत्तेजित गर्दछ र तपाईंको मस्तिष्कले छोड्ने एन्डोरफिनहरू बढाउँछ।
हाँसोले तपाईंको तनाव प्रतिक्रियालाई शान्त पार्छ। यो बढ्दा तपाईंको मुटुको दर र उच्च रक्तचाप घटाउन सक्छ। नतिजा एकदमै राम्रो देखिन्छ। आराम महसुस हुन्छ।तपाईंको हाँस्यको भावना सुधार गर्नुहोस्। के तपाईं डराउनुहुन्छ ?हाँस्यको भावना छ भने समस्या छैन। हाँस्य सिक्न सकिन्छ। वास्तवमा, विकास गर्न वा तपाईंको हास्य भावनालाई परिष्कृत गर्नु तपाईंको सोचाईभन्दा सजिलो हुनसक्छ।
तपाईंको क्षितिजमा हाँस्य राख्नुहोस्। केही साधारण आईटमहरू फेला पार्नुहोस्, जस्तै फोटोहरू, ग्रिटिङ कार्डहरू। तपाईंलाई थप हाँस्य बढावा चाहिने बेलामा हाँस्यास्पद चलचित्रहरू, पुस्तकहरू, म्यागजिनहरू वा हाँस्य भिडियोहरू राख्नुहोस्। मजाक वेबसाइटहरूमा अनलाइन तिनलाई हेर्नुहोस्। कमेडी क्लबमा जानुहोस्। ‘यदि तपाईं आफैंमा हाँस्न सक्नुहुन्छ भने तपाईंले अरू केहीको चिन्ता लिनु पर्दैन। विश्व लाफ्टर दिवस २०२१ को शुभकामना !